Ahoana no ahafahako manamarina ny isa nataoko SEO?
Matetika aho no mandre ny fanontaniana mikasika ny fizahana ny fandrosoana amin'izao fotoana izao na ny tombana amin'ny SEO iray. Saingy misy dikany ihany ve izy ireo? Raha miteny amim-pahatsorana aho, tsy azoko antoka raha misy ny tsara, na ny marary SEO na tsia. Raha ny marina, ny hevitra momba ny Search Engine Optimization dia tena manan-danja tokoa, miaraka amin'ny endrika maro amin'ny tetik'ady azo ampiharina izay mila fahatakarana mazava tsara ny mitondra ny tranokalanao ho an'ny tena fahombiazana eo amin'ny sehatry ny aterineto. Eny, toa ny valim-panontaniana mikasika ny SEO momba ny isa dia nanjary tsy misy ilàna azy. Raha ny marina dia tsy misy fitaovana amboara notanterahana nataon'ireo fitaovam-pikarohana mba hampitahantsika ny isan'ireo tranonkala tsirairay manohitra ireo hafa mifandraika amin'ny sehatry ny indostria, na farafaharatsiny loka mitovy amin'izany - como escolher o oculus de sol masculino en. Ary tsy misy fitaovana miasa na sehatra iraisana mba hanaovana fanadihadiana mitovy ho azy ireo: rohy, ireo famantarana sosialy hafa, ireo sehatra ara-teknika fototra ao amin'ny SEO, ny isan'ny hadisoana ao amin'ny pejy, ny haingam-pandao ny pejy, tsy lazaina intsony ny andiam-pifandraisana ary ny kalitao ao anatiny. Koa inona no valiny azontsika raisina? Andao hiezahana hahita ny zavatra azontsika atao amin'ny SEO isaky ny azo antoka.
Azontsika ampitahaina ny singa manan-danja ao amin'ny tranokalanao SEO manohitra ny mpifaninana akaiky anao.
Raha miresaka momba ny tena fototra, manoro hevitra aho hampitaha ny fahombiazan'ny vohikalanao amin'izao fotoana izao manohitra ny antontan'isan'ny mpanohitra anao. Azontsika atao ny mandalina ny fifamoivoizana organika avy amin'ny votoatin-teny taridalana ao anatin'izany orinasa izany, ary koa ireo mpihaino market mampiasa ireo fehezanteny fototra ireo rehefa mitady ny vokatra na ny serivisy. Raha manao izany ianao, dia ho afaka hahita raha toa ka mandeha eny amin'ny làlana marina ianao, na mety mila manakarama ireo manam-pahaizana amin'ny famahana haingana. Midika eto aho fa ny fametrahana ny SEO miasa miasa ivelany dia mety ho tsara ny famolavolana, tsy hiteny fotsiny ny fanapaha-kevitra hialana.
Afaka mandalina ny traikefa tsara indrindra amin'ny mpanohitra ianareo ary mahatsiaro maimaim-poana ny fampiasana azy manokana.
Mino aho fa ny fikarohana ireo porofo mazava momba ny fivoaran'ny mpifaninana aminao sy ny fampiharana ny fomba amam-panao tsara indrindra dia matetika ny vahaolana mazava sy mazava tsara hanatsarana ny isa SEO. Na izany aza, tsy midika izany fa mihetsika toy ny copycat aho. Mifantoha fotsiny amin'ny zavatra mahomby indrindra ary manomboka mitondra azy ireo eo amin'ny pejy Internet anao. Alao sary an-tsaina, ny mpanohitra matanjaka indrindra dia mahazo tombony tsara avy amin'ny media sosialy malaza. Ka maninona raha manara-dia sy mitondra ny pejinao SEO miaraka amin'ny zavatra nampiasaina, toy ny tia, manonona, ary mizara ao amin'ny Facebook, ohatra?
Azontsika fantarina izay ataon'ireo fahavalonareo amin'ny fomba tsy azo antoka.
Tahaka ny tafiditra amin'ny ady amin'ny fifaninanana hafa, dia mety ho hevitra tsara ny handresy ny lalao amin'ny fahatakarana ny fahalemen'ny fahavalo. Ary ity drafitra ity dia mahatsapa ny mbola bebe kokoa rehefa ampiasaina hanatsarana ny isa SEO ankehitriny. Noho izany, aza misalasala ny hampiasa ny fampiasana ny zavatra rehetra tsy ampoizina amin'ny mpanohitra anao - raha izany no tetik'adiny ao amin'ny votoatiny na lafiny hafa amin'ny Search Engine Optimization izay mbola tsy ampiasain'izy ireo foana.